Hunhu hwakanaka Archives - Tamban RELAY
runako Deredza uremu pakutengeserana Zvirongwa zvemasikirwo Zvepabonde uye hukama kutarisira
Kunetseka kunogara kwakanyanya kuomesa asi waizviziva here kuti kitsi inogona pasina mubvunzo…
bryamangwanabe Juil 3, 2020 0
Kunetseka kunogara kwakanyanya kuomesa asi waizviziva here kuti katsi pasina mubvunzo inodzikamisa? Kunetseka kunogara kwakanyanya kuomesa asi waizviziva here kuti katsi pasina mubvunzo inodzikamisa? Trendy anotsanangura…
Chipupuriro: kukuvadza kweshamwari dzine muchetura
Kupupurira: kukuvadza kweshamwari dzine muchetura Kunyangwe isu tichingozvikanganwa, hushamwari hunogona kukuvadza zvakanyanya serudo uye kunyanya kana paine vanhu vepedyo newe vanotamba nemanzwiro ako. ……
Nzira yekubvisa sei hwekunhuhwirira kwevakadzi nenzira yakasikwa mune ina-nhanho?
Mukutungamira, kunyange mune hutano hwakanaka, bonde rinogara riine kunhuhwirira zvishoma. Nekudaro kana iwe ukaona kunhuhwirira uku kusasimba kana kusingafadzi, zvinogona kuve dambudziko rehutano kunyanya kana kunhuhwirira kuchiperekedzwa nevamwe ...